I-PVC yeyona nto iphambili kwi-thermoplastic kwaye inoluhlu olubanzi lwezicelo. Okwangoku luhlobo lwesibini olukhulu kwimveliso yeplastiki yesibini kuphela kwi-polyethylene esezantsi.
Iimveliso zingahlulwa zibe yimveliso enzima kunye neemveliso ezithambileyo:
Ukusetyenziswa okukhulu kweemveliso ezilukhuni yimibhobho kunye nokufakwa, kunye nokunye ukusetyenziswa okuphambili ziipaneli zodonga, izahlulelo, iingcango kunye neefestile, izinto zokupakisha, njl.
Iimveliso ezithambileyo zisetyenziselwa iifilimu, amashiti, iingcingo kunye neentambo, izinto zokuthambisa, isikhumba sokwenziwa, njl.
I-PVC isetyenziselwa ntoni?
Ukwahluka kwezicelo zePVC kucelomngeni ukucinga. Kubomi bemihla ngemihla, zijikeleze thina: iiprofayili zokwakha, izixhobo zonyango, inwebu yophahla, amakhadi etyala, iithoyi zabantwana kunye nemibhobho yamanzi kunye negesi. Zimbalwa ezinye izinto ezinokubhetyebhetye okanye ezinakho ukufeza ezo nkcukacha zifunwayo. Ngale ndlela, i-PVC ikhuthaza ubuchule kunye nezinto ezintsha, isenza ukuba amathuba amatsha afumaneke yonke imihla.
Kutheni usebenzisa iPVC?
Kungenxa yokuba iimveliso zePVC zenza ubomi bukhuseleke, zizise intuthuzelo novuyo, kwaye zinceda ukugcina izibonelelo zendalo kunye nokulwa notshintsho lwemozulu. Kwaye, ngenxa yomlinganiso obalaseleyo wokusebenza, i-PVC ivumela abantu bayo yonke imigangatho yengeniso ukuba bafikelele kwiimveliso zayo.
Ifaka njani iPVP kwilizwe elikhuselekileyo?
Zininzi izizathu zokuba kungani iPV kunye nokhuseleko zidityanisiwe. Ngenxa yeepropathi zobugcisa ezingenakulinganiswa, i-PVC sesona sixhobo sisetyenziswa kakhulu ekulondolozeni ubomi nezixhobo zonyango ezingasasazeki. Umzekelo, i-PVC yonyango lwe-tubing ayisi kink okanye yaphule, kwaye kulula ukuyicoca. Ngenxa yokumelana nomlilo wePVC, ucingo kunye neentambo ezixutywe nge-PVC zithintela iingozi zombane ezinokubulala. Ngapha koko, i-PVC yinto eyomeleleyo. Isetyenziswa kwinto yemoto, i-PVC inceda ukunciphisa umngcipheko wokonzakala kwimeko yeengozi.